Sahansaho – Mashruuca ka hortagga Xaalufka Geeska Afrika | Suomen Somalia-verkosto
Sahansaho – Mashruuca ka hortagga Xaalufka Geeska Afrika
Qaybtii hadafka ugu muhiimsanayd, xarumihii Mashaariicda ayaa laga dhisay 3da goobbood ee Mashruuca Sahansaho ka socdo.
Xarumaha Mashruuca ayay shaqaaluhu ku kobciyaan dhirta, ku tijaabiyaan sida koraan dhirta kala duwan, isla markaana xarumaha waxaa lagu qabtaa Seminaaro iyo Tababaro lowgu talagalay dadkoo dhan, taas oo u jeedadeedu tahay sidii shacabka lowgu wacyi galin lahaa isla markaana, Xarumaha ayaa ay Goob shacabwaynaha oo dhan ay kulamo ku sameeyaan.
Waxaa intaa dheer in Xarumaha lagu tijaabiyo noocyada kala duwan ee Burjikooyinka Qoraxda ku shaqeeya iyo Burjikooyinka lagu beekhaamiyo Dhuxusha.
Wejigii ugu horeeyay ee Mashruuca Sahansaho 2012dii ee tijaabada ahaa, waxaa daraasad Mushruuca ku saabsan laga fuliyay Gobalada uu Mashruucu ka socda, iyadoo lala kaashanayo Jaamacadda Dhirta ee Helsinki Qaybta Viikki Tropical Resources Institut (VITRI).
Natiijadii ka soo baxday daraasadda ayaa Mashruuca waditaankiisa Bud-dhig looga dhigay, waxaana ka mid ahaa in xarumaha dhirta lagu kobcinayo ay ahaadaan noocyada ugu habboon ee la qabsan kara cimilada Goobta dhirta lagu beeri doono mustaqbalka.
Xarunkasta oo kamid ah xarumaha mashruuca, Ururka (NGO) maxaliga ah ayaa mas’uul ka ah hirgelinta hawlaha mashruuca. Intaas waxa dheer, waxay marwalba wadatashi iyo xiriir la samaynayaan urarka Finland ka howlgala ee ay Mashruuca kawada shaqaynayaan, iyo Shabakadda Finnish Somalia Network.
Intaa waxaa dheer Sadexda Urur ee Mashruuca Sadexda Gobol ee kala duwan ka wada, waxay u wada shaqaynayaan si aad u heer saraysa, waxaana ka mid ah waxyaalaha ay ka wada shaqaynayaan, is dhaafsi akhbaaraadka Mashruuca, is dhaafsiga arrimaha habka mashaariicda loo fuliyo, isku dar 7 Urur ayaa Mashruucan ka wada shaqaynaya, habkaan oo ah Hab cusub oo is kaashi, habkaas iskaashi ayaa loo arkaa in uu fure u yahay hab wax ku ool ah, oo hufan oo wax qabad dhab ah laga dhaxli karo.
Mashruuc sida wadajirka Ururadu u wada fuliyaan ee Sahanasaho wuxuu bilowday bilowgii sanadka 2012 waxaana maalgelinta Mashruuca bixisay Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Finland.
Ujeedka fog ee mashruucu waa la dagaalanka xaalufka, ka hortagga saxaraha iyo Tuseele u noqoshada sababihii lagu yarayn lahaa saboolnimada saddexda deegaan ee mashruucu ka socdo.
Mashruucan Sahansaho waxaa maamula iskuna duwa Finnish Somalia Network, waxaana kala shaqeeya oo ay howsha wada fuliyaan sadex Urur oo ka howl gala Finland oo xubno ka ah Finnish Somalia Network iyo Sadex urur oo iyana ka howl gala Geeska Afrika oo howsha Deegaanka ka socota u xilsaaran.
Sadexda urur ee Deegaanka ka howlgala oo layashaqeeya ururada Finland sida ay isugu xigaan:
Mashruuca Sahansaho eek a hortagga Xaalufka waxaa laga fuliyaa saddex goobbood oo ku yaalla: Degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud, Degmada Galkaacyo ee gobolka Mudug iyo Degmada Buuhoodle ee Gobolka Cayn.